WAXA AAD U BAAHAN TAHAY INAAD OGAATO MARKAAD SII KORDHEYSO, TALOOYIN KU SAABSAN KUWA BILOWGA AH - WARSHAD ORNAMENTAL KORAYA
Talooyin ku saabsan beeritaanka iyo daryeelidda feejignaanta
Verbena ee beerta - dhammeystiran oo buuxa naqshad muuqaal ah. Ubaxyo dhalaalaya, caleemo qani ah oo hodan ah - dhammaan fiilooyinkan. Warshadu waxay ka timaaddaa gobollada kuleylka ah ee Maraykanka, oo ah wakiil qoyska Verben ah, oo leh in ka badan 200 nooc oo ubaxyo kala duwan ah. Dad kala duwan ayaa ugu yeeray Verbena si kala duwan: "Cawska Hercules", "Venus xidido" ama "Mercury's blood".
Beerista geedo Verbena on geedo
Xirfadaha isku dhufashada waxaa lagu sameyn karaa siyaabo dhowr ah: abuur ama xoqin. Ubaxa wuxuu noqonayaa mid aad u caan ah beerta, iyo in la ogaado sida loo beerayo geedo geedo ah geedo waa muhiim.
Seeds of verbena, iyada oo ku xidhan noocyada, waxaa lagu duubi karaa qolof qaro weyn, taas oo si weyn u yareeya geedi socodka ay biqilka.
Waxaad soo ururin kartaa miraha fiilada, ka dib ubaxa ubaxu, u isticmaal abuurka la soo saaray ama iibso abuurka.
Ma taqaanaa?Haddii aad go'aansato inaad isticmaasho abuurkaaga, xasuuso in dabeecadaha kala duwan ee laga yaabo inay lumaan, iyo haddii aad go'aansato inaad isticmaasho iibsashada, hubso inaanay lahayn calaamadda F1, sida noocyada isbuuniga ah sida caadiga ah waxay tilmaamaan.
Sidaas, ka hor inta beerto abuurka, waxaad u baahan tahay in ay u kala saaro si loo hagaajiyo tayada geedo.
Naqshadda abuurka - nidaam aad u fudud ayaa ku lug leh daaweynta abuurka qabow. Kala saar abuurka qaboojiyaha, qaybta khudradda. Waxaa lagu dhajiyaa maro qoyan, oo lagu daboolay maro kale oo maro qoyan ah, lagu duudduubay polyetylen ama lagu rido weelka oo lagu rakibay qaboojiyaha dhawr maalmood.
Ka dib markii miraha la caleenta, waxaa lagu beeray kartaa mid dhulka u furan isla markiiba (seedless), ama lagu beeray sidii geedo.
Waxaa ugu wanaagsan inaad abuurto abuurka geedo ee March (tobane sano). Waxaa la dhigaa weelal gacmeed oo leh humus, perlite ama ciid: carrada waa in aan la bacrin. Seeds waxaa lagu beeraa iyadoo aan dhulka lagu qodin. Weelka ay ku jirto maqaarka waa in lagu daboolaa dabool qurub ah, ujeedkani polietilen ama muraayad ayaa ku haboon.
Waxaad arki doontaa caleemaha kowaad ee dhowr maalmood. Ka dib markaa, weelka waa in loo wareejiyaa meel qabow oo si fiican u iftiin leh. Ka dib 2-3 caleemo qaan ah ayaa u muuqda, daboolka ayaa la saaraa.
Waa muhiim! Muddadii markii abuurku yartahay uun, filimka (muraayadda) waa in si joogto ah looga saaraa hawo-qaadashada, iyo waraabinta waqtigan ayaa si fiican loogu sameeyaa dhalada buufin.
Ka dib markii ay ka saareen hoyga, vervain dhalinyarada waxaa lagu beeray karaa dheryo gooni ah, sii qoto dheer geedo si cotyledon caleemo. 2 toddobaad kadib, samee quudinta ugu horeysa, waxaad ku beeri kartaa warshad meel cusub. Dhalmada waqooyiga, Verbena waxaa la koray sanadkiiba.
Ka dib markii cimilada diiran ee la aasaasay, oo aysan jirin wax dhaxan, marin qallalan waxaa lagu beeray dhul furan. Dhulka dhexe ee degitaanka waxaa la fuliyaa bartamaha bisha Maajo. Ku dhaji si aad u fiican si aad u dooratid si wanaagsan oo iftiin leh loona ilaaliyo dabaylaha qabow iyo qoraallada.
Haddii dhirtu hesho qorraxda tooska ah - maaha mid cabsi badan, verbena si fiican ayey ula qabsan kartaa. Ciidda fayruusku waxay ku haboontahay mid kasta, hase yeeshee waa inay dabacsan tahay, oo la doorbidaa, loamy. Lakabka lakabka ah ma noqon doono mid aad u macquul ah, taas oo ka hortagi doonta istaabashada biyaha, oo waa inaadan isticmaalin ciidda leh qadar sare oo ah humus.
Ma taqaanaa? Haddii ciidda "dhanaan", waxaa lagu qasi karaa burka ama burka dolomite, tani waxay yarayn doontaa aashitada.
Fikradda falku waxay noqonaysaa mid sahlan:
Samee godadka dalagga dhulka.
Ku rid daaha yar ee maaddada dheecaanka ah ee ceelka.
Ku shub 2 koob oo biyo ah si kasta oo wanaagsan (marka la eego ciidda qalalan)
Ku dheji fiilada kubbadda dhulka ku duub.
Ku daadi dhulka dusha sare.
Si tartiib ah dhulka u hareereysan baadiyaha.
Masaafada u dhexeysa duurka waa inay ahaataa 20-25 cm, sidaas darteed dhirtu ma faragalinayso midba midka kale.
Verbena isku dhafan dhir kale
Verbena sariiraha ubaxa - Xalka ugu fiican ee loogu talagalay kuwa doonaya inay qurxiyaan beertooda. Marka la eego xaqiiqda ah in Verbena ay leedahay kumanaan doorasho midab leh, waxaa lagu dari karaa inta badan dhammaan ubaxyada beerta, ama waxaa loo isticmaali karaa in lagu qurxiyo cawska halkaasoo ay ka muuqan doonto midab madow.
Verbena si fiican ayay u socotaa chamomiles, wadajir waxay ka kooban tahay hal macaan iyo kareysa. Marka lagu daro marigolds, halabuurka wuxuu noqon doonaa caruurnimad taabasho. Shirkad cajiib leh ayaa lagu soo koobay.
Waxa kale oo ay u muuqataa qurux badan oo leh dhirta sida fudud oo caan ah sida rudbeckia, kosma, iyo delphinium. Wadajir waxay ka kooban yihiin hal-abuur leh muuqaal aad u qurxoon. Verbena waxay ku kori kartaa oo kaliya sariir, laakiin sidoo kale dheryaha, waxayna u egtahay mid aad u wanaagsan.
Talooyin daryeel oo loogu talagalay falsafada
Kaligiis, habka daryeellidda falsafadu waa mid sahlan, hase yeeshee, waxaa lagama maarmaan ah in lagu fuliyo kakan. Verbena waxay u baahan tahay waraabin badan, laakiin ma u dulqaadan biyaha taagan. Waxay ubaahantahay in si taxaddar leh loo waraabiyo inta lagu jiro xilliga koritaanka firfircoon iyo in la yareeyo qiyaasta biyaha ee qeybta labaad ee xagaaga.
Waa muhiim! Haddii aad ogaato in ciidda ay bilaabtay in ay qalalaan, waxaa lagama maarmaan ah in la dabciyo ciidda.
Haddii dhogortaada ay ku koraan beeritaanka, waxaad u baahan tahay oo kaliya inaad soo saarto cawska ka hor inta ay duurka u koraan, laakiin haddii aad kororsato kelmado keligiis, waxaad u baahan tahay inaad ka tirtirto haramaha xilliga oo dhan. Waxaa jira qarsoodi: haddii aad mulch ciidda leh caleenta ama wax kasta oo kale, uma baahnid inaad udgoonaan ubax.
Quudinta quudinta waxay u baahan tahay inay si buuxda u fuliso. Bacriminta dabiiciga ah waxaa loo oggol yahay in la isticmaalo mar keliya, sababtoo ah haddii kale dhulka waxaa laga yaabaa in lagu daro walxaha nitrogenous. Ma jiraan xayiraad ku saabsan samaynta bacriminta macdanta adag, waxaana la isticmaali karaa 1-2 jeer bishii. Saameynta wanaagsan ee wanaagsan ee koritaanka "Agricolor".
Daryeelka sidoo kale waa in laga takhaluso warshad of inflorescences qalajiyey. Haddii aad si habboon u daryeesho falsafada, waxay ku farxi doontaa oo kaliya ubax qurux badan, laakiin sidoo kale leh caraf udgoon.
Verbena waxaa badanaa loo adeegsadaa deegaankeena sida geedka sanadlaha ah, kadib marka ubax la gooyo, iyo dhulka uu ubaxa koray ayaa la qoday. DSi aad u ururiso abuurka dhirtaada, waxaa lagama maarmaan ah in la isticmaalo inflorescences marka sanduuqyada ubaxa ugu bilaabo inay qalalaan.
Ma taqaanaa? Waxaad ogaan kartaa diyaargarowga abuurka midabka midabka: sanduuqa ayaa soo jiidan doona bunni.
Duufaankii loo doortay ee "soo iibsiga" abuurka waa in lagu rakibaa dusha flat, flat iyo qalajiyey. Inta lagu jiro muddada qalajinta, waa in maaddada loo rogo si aan walaxda ceeriin ah u bilaabin si ay u noqoto mid cayriin.
Marka ubbooyinku dhoobo, miraha waxay u baahan yihiin in laga soo saaro nuts oo ku shub bac warqad ah. Ha iloobin inaad saxiixdid, taas oo muujinaysa taariikhda ururinta iyo fasalka. Haddii aad go'aansatay inaad ku beerato falsafadaada, ha iloobin in miraha gudaha ay waayaan astaamaha kala duwan waxayna ka duwanaan karaan "waalidiinta".
Sida loo isticmaalo naqshadeynta naqshadda muuqaalka
Verbena ee naqshada muuqaalka ayaa noqda mid caan ah. Waxay u egtahay mid aad u fiican ee beerto, kuwaas oo ka mid ah naqshadeeyayaasha waxay leeyihiin magaca "bouquet effect" - waxay u muuqataa mid si gaar ah soo jiidasho leh ubaxyo waaweyn oo ah qaboojin iyo xoqan. Naqshadeynta muuqaalka, ubaxa waxaa loo isticmaalaa labadaba koox iyo beerashada kali ah.
Waxay u egtahay mid gaar ah quruxda marka loo isticmaalo qurxinta alpine slides iyo rabatok. Verbena waxaa laga soocaa dhirta kale oo leh ubaxyo yaryar oo si fiican ugu habboon qurxinta qurxinta beeraha iyo jarradaha.
Verbena iska caabin ah cudurada iyo cayayaanka
Verbena - dhirta u adkaysata cudurrada iyo cayayaanka, waxayna saameyn ku yeeshaan iyaga oo aad u dhif ah.
Waa muhiim! Cudurada ugu badan ee feyruusta ah waxay u muuqdaan daryeel xumo, sidaas awgeed waa in la raaco xeerarka biyo, looshin iyo labis.
Iyada oo waraabinta xad-dhaafka ah, verbena waxay dhib ku noqon kartaa xayrta maqaarka ah, madow iyo cudurro kale oo fangas ah. Si aad wax uga qabato dhibaatooyinka noocaas ah, waxaad isticmaali kartaa fangasyada kala duwan, ku buufin warshad leh xal xummo kiriim ah ama biyo ku shub dambas.
Sidoo kale on ubaxa "riix" shil ama aphids. Dhibaatadani waxaa lagu xalliyaa caawinaadda cayayaanka. Way ka fiican tahay in laga hortago cudurrada, sababta oo ah dagaalka iyaga ka soo horjeeda ma aha mid had iyo jeer ku dhammaan doona raalli ahaanshaha mulkiilaha ubaxa.
Verbena waa warshad aad u fiican, si sahlan oo loo jaro oo uma baahna daryeel gaar ah. Koritaanka ubaxkan uma baahna dadaal badan, sidaas darteed xitaa xitaa acus ayaa la qabsan doona. Verbena ayaa ku farxi doonta midabka iyo carafka, haddii aad ku dari kareyso gabal naftaada ah si ay u daryeelto.